Shina · Desambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Desambra, 2018
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Desambra, 2018
Shina: Mitady Fanendrena ny Tranombakoky ny Kolikoly
Fanabeazana 31 Desambra 2018
Kasaina ho atsangana ao amin'ny faritany atsimo-atsinanan'i Sichuan ny tranombakoka iray momba ny kolikoly, araka ny tatitry ny China Daily, izay mitanisa avy tamin'ny gazety iray tao an-toerana. Mitady fanendrena avy amin'ireo mpampiasa aterineto hanondro ireo mpiasam-panjakana 100 voafatotry ny kolikoly be indrindra nandritra ny taonjato farany teo ilay tranombakoka.
Uyghur: Silamo Vitsy an'Isa Voaenjika any Avaratra Andrefan'i Sina
Fahalalahàna miteny 30 Desambra 2018
Androany, ifantohantsika ny toedraharaha atrehin'ireo Uyghur, silamo vitsy an'isa monina any Xinjiang any Sina, ny kolontsainy izay fongoran'ny governemanta fiobe sinoa, voalohany, satria noheverina ho toy ny mpitaky fizakan-tena ry zareo, ary izao dia raisina ho mpampihorohoro ihany koa, taorian'ireo fanafihana tamin'ny 11 Septambra tany Etazonia.
Sina: Miadana ireo Vaovao momba ireo Fikomiana ao Urumqi
Fanoherana 22 Desambra 2018
Miatrika ny hatezeran'i Pekin ny foko Uyghur vitsy an'isa ao Sina taorian'ireo fikomiana niseho tao amin'ny tanànan'i Urumqi, faritanin'i Xinjiang.
Sina: Ny Fanorenana Repoblika
Mediam-bahoaka 21 Desambra 2018
Ho fankalazana ny faha-60 taona niorenan'ny Repoblikam-Bahoaka ao Sina ny 1 Oktobra, halefa rahampitso 17 Septambra ny sarimihetsika ''Ny Fanorenana Repoblika''. Niteraka resabe mafana tao amin'ny Aterineto ilay sarimihetsika - tsy noho ilay sarimihetsika manokana, fa noho ny fiavian'ireo mpanakanto
Fahalalahàna miteny 12 Desambra 2018
Heverina ho an-jatony na mihoatra aza ny isan'ireo mpisera Twitter voarahon'ny manampahefana mivantana.
Ny taombaovao Shinoa
Mediam-bahoaka 12 Desambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ny alin'ny taom-baovao Shinoa (28 Janoary 2006) dia heverina ho fetibe manan-danja indrindra ao Shina ary manamarika ny fiandohan'ny herintaona miaraka amin'ny fiavian'ny lohataona mafana izay antsoina ihany koa hoe Fetiben'ny Lohataona noho izany. Mibilaogy izahay ary miaraka mankalaza ny...
Global Voices amin'ny Teny Sinoa!
Taiwan (ROC) 11 Desambra 2018
Tamin'ny volana Septambra lasa teo, nanomboka nandika lahatsoratry ny Global Voices amin'ny teny Sinoa ny bilaogera Taiwaney Portnoy - tsy izy rehetra, tsy ho vitan'olona iray izany, fa mitsimpona ary misafidy ireo zavatra noheveriny fa tokony ho fantatry ny tontolo mpiteny Sinoa bebe kokoa izy.
Eoropa Andrefana 10 Desambra 2018
Google.cn tany Shina
Fahalalahàna miteny 06 Desambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Namoaka ny tolotra miaraka amin'ny sehatra vaovao Google.cn amin'ny dikanteny Shinoa ny Google, ilay fitaovam-pikarohana goavana amin'ny aterineto. Teo aloha, mizotra mankany amin'ny http://www.google.com/ig?hl=zh-CN ity sehatra ity, ilay fikarohana amin'ny alàlan'ny Google amin'ny dikanteny Shinoa any Etazonia. Nanivana votoaty sy...
Nanatevin-daharana ny diabe goavana tany Hong Kong ireo bilaogera
Hong Kong (Shina) 04 Desambra 2018
Namaly ny diabe tamim-pahavitrihana tokoa tamin'ny fomba maro samihafa ny andro manaraka ireo bilaogera ao Hong Kong. Niresaka betsaka momba ity diabe tamin'ity 4 Desambra ity ny tranonkalam-bilaogy Shinoa malaza antsoina hoe Independent Media izay notantanan'ny mpitsikera ara-kolotsaina sasany tao Hong Kong.